Maxaa saldhig u ah codaynta labada hab doorasho ee uu soo…
Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo Sabtigii hortagay Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay laba nooc oo ay u dhici karto doorashada soo socoto, iyaga oo sheegay in nooca ku xusan sharciga doorashooyinka ee dhawaan uu saxiixay Hogamiye Farmaajo uu yahay mid waqti iyo kharash badan u baahan.
Guddiga ayaa cadeeyay in nooca diiwaangelinta codbixiyaha ay noqoto habka casriga ah ee Biometric-ga, kaas oo uu saxiixay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo u baahan lacag dhan $69,670,725.
Hadaba Maxaa saldhig looga dhigay qorshahaan?.
In la helo shuruuc doorasho oo la fulin karo laguna heshiiyay.
In isku mar la qabanayo doorashooyinka labada aqal
In diiwaangalinta codbixiyaha la qabanayo ka hor doorashada
In la samaynayo 500 xarun codbixineed
In ay codeynayaan qiyaasta 3 milyan oo codbixiye
In laga codeynayo 5,000 goob codbixineed.
In halkii goob ay ka codeyn doonaan ugu badnaan 600 oo codbixye
In hal maalin codeyntu dhacayso
In uu diyaar yahay dhaqaale ku filan doorashada ayna bixiyaa dawlada Soomaaliya
iyo deeq bixiyeyaasha caalamiga ah.
In la isticmaalo qandaraaslihii hore loo sameeyay ee laga iibin lahaa qalabka
diiwangalinta loo isticmaalayo ee (Biometric) kaas oo qandaraaskiisa ku eg bisha
In Miisaaniyad gaar ah ah loo diyaariyo sugida amniga doorashooyinka
Kan labaad ee Guddigu soo bandhigay Waa habka diiwaangelinta gacanta ee isla maalinta codbixinta, kaasoo dadka codkooda dhiibanaya lagu diiwaangelinayo gacanta isla maalinta codbixinta iyada oo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah.
Qaabkaan ayaa waxaa ku baxaya lacag dhan $46,192,389 taas oo ka yar lacagtii ku baxaysay diiwaan galinta qaabka casriga ah.
Maxaa saldhig u ah qorshaha 2 aad ee diiwaan galinta gacanta?
In wax laga baddalo sharciga doorashooyinka sida uu hadda u qoran yahay.
In isku mar la qabanayo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka.
In diiwangalinta codbixiyaha la samaynayo maalinta codbixinta.
In la samaynayo 500 xarun codbixineed.
In ay codeynayaan qiyaasta 3 milyan oo codbixiye.
In halkii goob ay ka codeyn doonaan ugu badnaan 600 codbixye
In codeyntu soconayso maalmo badan
Labadan hab doorasho oo kiiba u baahanyahay waqti iyo qarash kala badan ee uu soo bandhigay guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxaa taageeray Xubanaha beesha Caalamka ee Soomaaliya ku sugan.
Madaxweynayaashii hore ee dalka iyo siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa dhankooda diiday qorshahaan iyaga oo guddiga u baaqay in ay iscasilaan,arintaana salka ku hayso mudo kororsi ay gadaal ka riixayso Madaxda Xukumadda Faderaalka Soomaaliya.
Marka lagaaro xilligaan oo kale waxaa Magaaladda Muqdisho ku soo laabta siyaasiyiinta Magaca ku leh Soomaaliya, waxaana bata eedaymaha iyo isku jawaabida siyaasiyiinta sida caadada u ah Siyaasada Soomaaliya oo mudo burbur ku jirtay balse xalku waxa uu ku jiraa wada hadal iyo isqancin dhexmarta.
Soomaaliya ayaa la filayaa in ay ka dhacdo codbxintii ugu horreysay ee dimuqraadi ah muddo 50 sano kabadan. Xisbiyo badan oo si kumeelgaar ah loo diiwaangeliyay ayaa doonaya in ay u tartamayaan doorashadaasi baarlamaaniga ah.